14 mai 2018 · déliremadagascar
Archives journalières 14 mai 2018
Mampiakatra ny tahan’ny vokatra avy amin’ny fambolena ny fampiasana zezika biolojika. Ho an’ny firenena lehibe tahaka an’i Chine, 200 kilao isaky ny hektara ny zezika ampiasain’ny tantsaha. Continuer la lecture →
Namoaka mpianatra nahazo ny mari-pahaizana Licence indray ny oniversite HPI/MASCA Sabotsy Namehana. Mpianatra 37 avy amin’ny lalam-piofanana fitsaboana (Paramedicaux), fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, (Agronomie) ary serasera (communication et journalisme) ireto tarika indray nihira andiany faharoa ireto. Continuer la lecture →
MPANAO GAZETY: Mitondra fitoniana na firehetana.
Mpisehatra mitondra filaminana na fikorontanana amin’ny firenena ny mpanao gazety. Fepetra takiana amin’ny asa fanaovan-gazety ny fanoavana “recoupement” na fanamarinana ny vaovao. Continuer la lecture →